नेता खड्काको निधनले दाङ स्तब्ध « प्रशासन
दंगालीहरुले विकासप्रेमी नेतालाई गुमाएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । खड्कालाई पार्टीमा जेसुकै भनिए पनि जिल्लाको विकास निर्माणमा उदार मनको नेता भएकाले सबैले उनको उच्च सम्मान गरेका छन् । खुमबहादुर साँच्चै प्रजातन्त्रका योद्धा अनि जुधारु नेता पनि थिए, उनलाई गुमाउनुपर्दा धेरै दुःख लागेको छ’– बयोवृद्ध दलबहादुर वलीले भने ।
प्रजातन्त्रका सेनानी तिलक डांगीले स्व. खड्का निःस्वार्थ विकासप्रेमी नेता भएको बताए, ‘जिल्लाको विकास, निर्माण र समृद्धिको काम गरेर कुशल संगठकका रुपमा पनि प्रजातन्त्रको कुशल नेतृत्व गुमाएका छौँ, प्रजातन्त्रका लागि अहोरात्र खट्ने, कुशल संगठनकर्ता, विकासप्रेमी नेता खड्काको निधनले एउटा विकासको नक्षत्र हो ।’
स्व. खड्काको जन्मथलो घोराही उपमहानगरपालिका–५ गाविस वडा नं ६स्थित भैसाप्रथा गाउँ शोकमा छ । स्थानीयवासी आफूहरुले मात्र नभएर देशले नै अभिभावक गुमाएको बताए ।
विगतमा उनको नाम सुन्दा खुशीले प्रफुल्ल हुने स्थानीयवासीमा मृत्युको खबर सुन्दा अप्रत्यासित लागि रहेको स्व. खड्काका अभिभावक समेत रहेका स्थानीयवासी सुरवीरसिंह वली बताए । ‘खुमबहादुरको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको सबैले सुनाउँछन्, तर मलाई विश्वासै लाग्दैन’, खड्कासँगै बाल्यकाल बिताएका उनले भने ।
‘पहिले गाउँमा सडक थिएन, खानेपानीका लागि एक घण्टा हिँडेर जानुपथ्र्यो, तर खुमबहादुर मन्त्री भएको बेलामा गाउँमा कुवा बनाइदिए, बिजुली बत्ती ल्याइदिए, सडक र सिँचाइको व्यवस्थासमेत गरिदिए’ स्थानीय केशरबहादुर केसीले भने । त्यस्तै खड्काको निधनसँगै उनको गृह गाउँ लमही नगरपालिका–८ सतवरिया शोकमा डुबेको छ ।
काँग्रेस समर्थकलाई मात्र होइन सबै पार्टीप्रति आस्था राख्ने सबै दुखी बनेका खड्काको निधनमा । खड्का काँग्रेसका नेता मात्र होइन जिल्लाको विकासको सारथी नै थिए । ‘सबैको साझा नेता खड्कालाई हामीले गुमाएका छौँ । आफ्नो अभिभावक गुमाएको पीडा शब्दमा उतार्न सकिँदैन’ लमही नगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष मेघनारायण चौधरीले भने ।